Ithuluzi Lokulungisa Ihhovisi. Ukulungisa Ukufinyelela, i-Excel, i-Outlook, PowerPoint & Amafayela eZwi.
DataNumen Office Repair iyona best Indawo yokutakula ye-Microsoft Office emhlabeni. Kubandakanya amathuluzi wokutakula imininingwane yolwazi yokuFinyelela i-MDB ne-ACCDB, ama-worksheet e-Excel XLS & XLSX, amafayela we-Outlook PST, PowerPoint Izethulo ze-PPTX, nemibhalo ye-Word DOC & DOCX.
4.90 / 5 (kusuka kumavoti angu-1,610)
Kungani DataNumen Office Repair?
Izici eziyinhloko ku DataNumen Office Repair v5.5
Ukusekela ukulungisa iMicrosoft Access 95 kuya ku-2019 kanye ne-Access for Office 365 yolwazi.
Ukusekela ukulungisa amafayela we-Microsoft Excel xls nama-xlsx ku-Excel version 3.0 kuya ku-2019 naku-Excel yamafomethi we-Office 365.
Ukusekela ukulungisa iMicrosoft Outlook 97 kuya ku-2019 ne-Outlook yamafayela wedatha ye-Office 365 PST.
Ukusekela ukulungisa iMicrosoft PowerPoint 2007 kuya ku-2019 futhi PowerPoint Amafayela we-Office 365 pptx.
Ukusekela ukulungisa iMicrosoft Word 6.0 kuya ku-2019 nemibhalo ye-Word for Office 365.
Ukusekela ukulungisa amafayela kwimidiya eyonakele, njengamadiski e-floppy, Zip amadiski, ama-CDROM, njll.
Ukusekela ukulungisa iqoqo lamafayela akhohlakele.
Sekela ukuhlanganiswa neWindows Explorer, ukuze ukwazi ukulungisa ifayili ngemenyu yokuqukethwe yeWindows Explorer kalula.
DataNumen Office Repair 5.5 ikhishwa ngoMeyi 3, 2021
DataNumen Office Repair 5.2 ikhishwa ngoDisemba 25, 2020
DataNumen Office Repair 5.0 ikhishwa ngoNovemba 3, 2020
kubuyekeze DataNumen Access Repair enguqulweni 3.1
kubuyekeze DataNumen Excel Repair enguqulweni 2.9
kubuyekeze DataNumen PowerPoint Recovery enguqulweni 1.2
kubuyekeze DataNumen Word Repair enguqulweni 3.5
kubuyekeze DataNumen Outlook Repair enguqulweni 7.6
DataNumen Office Repair 4.9 ikhishwa ngo-Agasti 20th, 2020
kubuyekeze DataNumen Outlook Repair kuya ku-7.5.
DataNumen Office Repair 4.8 ikhishwa ngoJuni 22, 2020
kubuyekeze DataNumen Access Repair kuya ku-3.0.
kubuyekeze DataNumen Outlook Repair kuya ku-7.2.
DataNumen Office Repair 4.6 ikhishwe ngoFebhuwari 8, 2020
kubuyekeze DataNumen Outlook Repair kuya ku-7.1.
DataNumen Office Repair 4.5 ikhishwa ngoNovemba 25, 2019
kubuyekeze DataNumen Access Repair kuya ku-2.9.
kubuyekeze DataNumen Excel Repair kuya ku-2.8.
kubuyekeze DataNumen PowerPoint Recovery kuya ku-1.1.
kubuyekeze DataNumen Word Repair kuya ku-3.4.
DataNumen Office Repair 4.1 ikhishwa ngo-Agasti 12th, 2019
kubuyekeze DataNumen Access Repair enguqulweni 2.8
DataNumen Office Repair 4.0 ikhishwa ngoJulayi 15, 2019
kubuyekeze DataNumen Outlook Repair enguqulweni 6.8
DataNumen Office Repair 3.9 ikhishwe ngo-Ephreli 25, 2019
kubuyekeze DataNumen Access Repair kuya ku-2.7.
DataNumen Office Repair 3.8 ikhishwa ngo-Ephreli 2, 2019
kubuyekeze DataNumen Outlook Repair kuya ku-6.6.
kubuyekeze DataNumen Word Repair kuya ku-3.2.
DataNumen Office Repair 3.6 ikhishwa ngoJanuwari 21, 2019
kubuyekeze DataNumen Access Repair enguqulweni 2.6
kubuyekeze DataNumen Excel Repair enguqulweni 2.4
kubuyekeze DataNumen Outlook Repair enguqulweni 6.5
Faka esikhundleni DataNumen Outlook Express Repair nge DataNumen PowerPoint Recovery
kubuyekeze DataNumen Word Repair enguqulweni 3.1
DataNumen Office Repair 3.3 ikhishwa ngoNovemba 22, 2018
kubuyekeze DataNumen Outlook Repair kuya ku-6.0.
kubuyekeze DataNumen Word Repair kuya ku-3.0.
DataNumen Office Repair 3.2 ikhishwa ngoSepthemba 9, 2018
kubuyekeze DataNumen Excel Repair enguqulweni 2.3
kubuyekeze DataNumen Word Repair enguqulweni 2.9
DataNumen Office Repair 3.0 ikhishwa ngoJulayi 23, 2018
kubuyekeze DataNumen Word Repair enguqulweni 2.8
kubuyekeze DataNumen Outlook Repair enguqulweni 5.6
DataNumen Office Repair 2.8 ikhishwe ngoMeyi 11, 2018
kubuyekeze DataNumen Access Repair enguqulweni 2.3
kubuyekeze DataNumen Word Repair enguqulweni 2.7
kubuyekeze DataNumen Outlook Repair enguqulweni 5.5
DataNumen Office Repair 2.6 ikhishwe ngoMeyi 29, 2016
kubuyekeze DataNumen Excel Repair enguqulweni 2.2
kubuyekeze DataNumen Outlook Repair enguqulweni 5.4
DataNumen Office Repair 2.5 ikhishwa ngo-Agasti 21, 2015
kubuyekeze DataNumen Word Repair enguqulweni 2.5
kubuyekeze DataNumen Outlook Repair enguqulweni 5.3
DataNumen Office Repair 2.1 ikhishwa ngo-Okthoba 5, 2013
kubuyekeze DataNumen Access Repair kuya ku-2.2.
kubuyekeze DataNumen Excel Repair kuya ku-2.1.
kubuyekeze DataNumen Word Repair kuya ku-2.1.
kubuyekeze DataNumen Outlook Express Repair kuya ku-2.2.
DataNumen Office Repair 2.0 ikhishwa ngoJulayi 2, 2013
kubuyekeze Advanced Word Repair kuya ku-2.0.
kubuyekeze Advanced Excel Repair kuya ku-2.0.
DataNumen Office Repair 1.5 ikhishwa ngoJulayi 2, 2009
kubuyekeze DataNumen Access Repair enguqulweni 2.1
kubuyekeze DataNumen Outlook Repair enguqulweni 2.1
kubuyekeze DataNumen Outlook Express Repair enguqulweni 2.0
DataNumen Office Repair 1.0 ikhishwe ngoFebhuwari 19, 2006
Ukuhlanganiswa kwedatha yokuhlanganiswa kwedatha ye-Microsoft Office. Kubandakanya amathuluzi wokutakula imininingwane yolwazi eyonakele noma eyonakele ye-MS Access, ama-MS Excel worksheets, imibhalo ye-MS Word, amafayela wedatha ye-MS Outlook, ne-MS Outlook Express dbx namafayela we-mbx.
Lungisa futhi uthole iMicrosoft ekhohlakele PowerPoint amafayela we-.pptx.